विजनेस | E-Highway News
छोटी भन्सार पुर्न स्थापना नहुँदा तस्कारी
Dec 03 2018 04 : 11am । 322
माओवादी शसस्त्र द्धन्दका वेला बिस्थापित भएका रौतहटका छोटि भन्सार कार्यालयहरु पुर्न स्थापना नहुँदा तस्कारी मौलाएको छ । छोटी भन्सार कार्यालय स्थापना नहुँदा सिमा नजिक रहेका नेपाली व्यापारीहरु राजश्व तिरेर कारोबार गर्न सदरमुकाम गौरमा रहेको भन्सार कार्यालय पुग्नु पर्ने वाध्यता छ ।
संकल्पले दियो सहकारी शिक्षा, सुत्केरी संग पनि भेटघाट
Dec 02 2018 05 : 34am । 289
संकल्प बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. चन्द्रपुरले एक दिने सहकारी शिक्षा दिएको छ । चन्द्रपुर ३ स्थित गैडाटारमा रहेको श्री जनशतिm माध्यमिक विद्यालयमा सदस्यहरुलाई सहकारीले दिदै आएको सेवा सुविधा र महत्वको बारेमा जानकारी गराईएको थियो । सहकारी सदस्य शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत संस्थाले उतm कार्यक्रम संचालन गरेको हो ।
रौतहटको चन्द्रपुरमा स्प्रीङ्ग एकुवा नामको पानी उधोग स्थापना
Nov 29 2018 05 : 12am । 238
रौतहटको चन्द्रपुरमा निजि स्तरको लगानीमा पानी उधोग सञ्चालनमा आएको छ । चन्द्रपुर ९ स्थित डुमरिया मटिऔनमा हर्वोवेदा ग्रामोले मिनलर वाटर पानीको उधोग संञ्चालनमा ल्याएको हो । करिव ८० लाखको लागनीमा स्थानिय मनोज कुमार साह तथा कुन्दन कुमार सागरले स्प्रीङ्ग एकुवा नामको पानी उधोग स्थापना गर्नुभएको हो ।
स्वास्तिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि चन्द्रपुरको छैठो बार्षिक साधरण सभा सम्पन्न
Oct 05 2018 06 : 56am । 343
स्वास्तिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि चन्द्रपुरको छैठो बार्षिक साधरण सभा शहिद स्मृत पार्कमा सम्पन्न भएको छ । साधरण सभाको प्रमुख अतिथी चन्द्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामचन्द्र चौधरीले उद्घाटन गर्नुभएको हो । उतm कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नगरको दोश्रो सभाबाट सहकारी ऐन नियम बन्दै गरेको र यसमा आवश्यक छलफल हुने समेत बताउनुभयो ।
विन्दावासिनी सहकारीले आठौ स्थापना दिवस मनायो
Aug 17 2018 06 : 50am । 508
विन्दावासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. चन्द्रनिगाहपुरले आठौ स्थापना दिवस विविध कार्यक्रम गरि मनाएको छ । २०६७ साल भाद्र १ गते देखि संचालनमा आएको सो सहकारीले स्थापना दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
भारतीय गुटखा अवैध रूपमा भित्रियो
Aug 11 2018 10 : 40pm । 180
रौतहट र आसपासका क्षेत्रमा भारतीय गुटखा अवैध रूपमा भित्रिने गरेको पाइएको छ । गौर भन्सार नाकाबाट राजस्व दाखिला नगरी रजनीगन्धा, पानपराग, राजनिवास, कमलापसन्द लगायतका भारतीय गुटखा भित्रिने गरेको छ ।
रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा मुतिmनाथ विकास बैंक लि.को शाखा बिस्तार
Aug 07 2018 07 : 09am । 165
मुतिmनाथ विकास बैंक लि.ले रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको चन्द्र्रनिगाहपुर बजारमा सेवा बिस्तार गरेको छ । स्थानिय तहको ग्रमिण भेगमा सेवा बिस्तार गर्ने योजना अनुसार बैकले शाखा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
महिला फुटवल खेलाडी पौडेल ब्राण्ड एम्बास्डरमा नियुक्त
Jul 31 2018 06 : 59am । 200
रौतहटको चन्द्रपुर–५ मा रहेको मुन ड्रप्स वेभरेज कम्पनी प्राईभेट लिमिटेडले राष्ट्रिय महिला फुटबल खेलाडीलाई ब्राण्ड एम्बास्डरमा नियुक्त गरेको छ । कम्पनी द्धारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा दुबैपक्षले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी लक्ष्मी पौडेल ब्राण्ड एम्बास्डरमा नियुक्त गरेको हो ।
रौतहटका युवा पोल्टिफर्म तर्फ
Jul 29 2018 07 : 23am । 152
रोजगारीका लागी युवाहरु बिदेशीने क्रम बढिरहेको अवस्थामा रौतहटमा भने एक युवाले पोल्टिफर्म सञ्चालन गरेर बार्षिक लाखौ आम्दानी गर्दै आएका छन् । चन्द्रनिगाहपुरका युुवा फिरोज श्रेष्ठले २०७० सालदेखि संञ्चालन गरेको आईएस पोल्टिफर्ममा लेयर्स जातको कुखुराबाट अण्डा उत्पादन गरेर आम्दानी लिन सफल भएका हुन् ।
बजार अनुगमनको माग
Jul 29 2018 06 : 54am । 195
रौतहटको प्रमुख बजारमा हुने कालोबजारीका कारण उपभोतmा ठगिएको प्रति उपभोक्ता हित संरक्षण मंच रौतहटले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आईतबार एक प्रेस बिज्ञाप्ती जारी गर्दै मंञ्चले चन्द्रपुर र गरुडा नगरपालिका क्षेत्रका थोक तथा खुद्रा र साना हाटबजारका खुद्रा व्यापारीहरुले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा अत्यधिक मिसावट र बढी मूल्य लिईरहेको पाईएको बताएको छ ।